erectile အခက်အခဲများကြုံနေရ ပို. ပို. လူပျိုတို့။ Sexologist အမ်မလီပါဝါစမစ်, (2019)
သောကြာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 15, 2019 - 12:00 pm တွင်
porn သူတို့အွန်လိုင်းမြင်အထီးသရုပ်ဆောင်များကိုမှတက်တိုင်းတာသင့်တယ်ယုံကြည်သူလူပျိုတို့အတွက် erectile အခက်အခဲများမှဦးဆောင်နေသည်ကိုကြည့် Bing, ရေးသားခဲ့သည် Áilín Quinlan ။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ဒါမှမဟုတ်ခွန်အားမရှိခြင်း, မသာလူသားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အပေါ်သက်ရောက်မှု, ဒါဟာသူ့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်, သူ၏ဆကျဆံရေး, သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကမောက်ကမ - ကပုံရသည်, ထိုပြဿနာတိုးပွားလာနေသည်။
လိင်အဘို့အလုံအလောကျအခိုငျအမာတစ်ခုစိုက်ထူရစောင့်ရှောက်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်သော - - သူတို့ရဲ့ 20 နှင့် 30s အတွက်ယောက်ျားအတွက်တိုးအပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သုတေသန erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်ခွန်အားမရှိခြင်းကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဒီဆက်သွယ်ရေးနှင့်သွေးစီးဆင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုနှောင့်ယှက်သည့်ထိုကဲ့သို့သောဆီးချို, နှလုံးရောဂါ, အဝလွန်ခြင်း, သွေးတိုးသို့မဟုတ်မြင့်မားသောလက်စထရောလ်အဖြစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ, မကြာခဏ ED နှင့်အတူဆက်နွယ်နေလျက်ရှိသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက် Coop ဆေးဝါးများအတွက် 2,000 ယောက်ျား၏လေ့လာမှုတစ်ခုနောက်ဆုံးဇွန်လသူတို့ရဲ့ 50s အတွက်သူတို့၏အမျိုးအလုနီးပါး 30% တစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အခက်အခဲများအစီရင်ခံခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နီးပါးတစ်ဝက်အပြစ်တင်စိတ်ဖိစီးမှုသူများ၏အကြောင်း 25% မိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်ဖို့ပြဿနာစွပ်စွဲနှင့် 36% 29% မှာစိုးရိမ်စိတ်များကနောက်တော်သို့လိုက်မောပန်းလို့အပြစ်တင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုမကြာခဏ erectile အခက်အခဲများစွာကိုဖြစ်ပွားအမြစ်မှာအိပ်စေခြင်းငှါစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Sexologist အမ်မလီပါဝါစမစ်တစ်ခုစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူတို့ရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်လုလင်အများကြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါတယ်။
သူမသည် erectile အခက်အခဲများနှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်အထီးထိခိုက်ဘုံပြဿနာများဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတကာသုတေသန ED သူတို့ရဲ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အစောပိုင်း 20s အတွက်လုလင်တို့သည်တိုးပွါးလျှင်ကြောင့်ကြည့်ကိုပြောနေပါတယ်။
သို့သော်များစွာသောလုလင်တို့သည်မကြာခဏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု misdiagnose ။
ယောက်ျားပါဝါစမစ်၏အများစုသည်တဲ့အခါမှာလူတယောက်သည်အတွေ့အကြုံများကိုဖြစ်ပေါ်ရသော ED, သုံးလနှင့်ခြောက်လအကြားကာလအဘို့, ပေါ်ပေါက်ဖို့ထိုးဖောက်မှုများအတွက်လုံလောက်ခက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစိုက်ထူထပ်ခါတလဲလဲကြပါဘူးမြင်သည်။ အဲဒီအစားသူမသူတို့မကြာခဏတစ်ခု erectile အခက်အခဲရှိသည်, ကပြောပါတယ်။
ထိုပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏မိသားစုဆရာဝန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသူကိုအထီး clients များမကြာခဏရုံ Viagra များအတွက်ဆေးညွှန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်သူမကမှတ်ချက်ပေး။
သို့ရာတွင်ထိုသို့သူမရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်ယင်းအခက်အခဲ၏အမြစ်အကြောင်းမရှိသို့ကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မကြာခဏ porn ကြည့်ရှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
"ကျနော်တို့အကြောင်းတရားများမှာရှာနေနှင့်လူတို့၏ porn မြန်နှုန်းမြင့် broadband ၏ရလဒ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီ watch ဘယ်လိုငယ်ရွယ်၏သဘောသဘာဝဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်နှုန်းမြင့် broadband ၏နိဒါန်းနှင့်အတူတစ်ဦးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ "
ပိုမိုမြန်ဆန်ဘရော့ဘန်းမြန်နှုန်းညစ်ညမ်း၏အလွန်ကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးမှချက်ချင်း access ကိုဆောင်တတ်၏ထို့ကြောင့်အစဉ်မပြတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့လှုံ့ဆော်ဖို့အလွန်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့မြင်ကွင်းများအကြားရှေ့ဆက်နဲ့နောက်ပြန်အစဉ်မပြတ် '' switch ကို 'ရန်ကိုကြည့်ရှုသူများခွင့်ပြုပါတယ်။
"လူငယ်ယောက်ျားဘာလုပ်ရမှန်းသင်ယူဖို့ porn အာရုံစိုက်," ပါဝါ Smith ကရှင်းပြသည်။
ဒီအဆင်မပြေအထီး porn ကြယ်များကိုသိသာပြံ့နှံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုမကြာခဏလုလင်တို့သည်သူတို့အမျှော်လင့်ထားသည့်ဘာတခုတခုအပေါ်မှာလက်တွေ့ရှုထောင့်ပေးသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
သုတေသနရှိုးများ, သူမခက်ခဲ porn စောင့်ကြည့်သူကိုလူပျိုတို့အဓိကအားလိင်တံကိုအာရုံစိုက်ဖို့လေ့အကြောင်း, မိန့်တော်မူ၏ ကလှုံ့ဆော်ပေးပုံကိုကခက်ခဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံး၎င်း၏အရွယ်အစား, ။
ပါဝါစမစ်လည်းထောက်ပြအဖြစ်သို့သော်, အထီး porn ကြယ်များမကြာခဏကင်မရာများရှေ့တွင်စိုက်ထူဆက်လက် Viagra ကိုအသုံးပြုပါ။
"ယောက်ျားများ porn စောင့်ကြည့်ပြီးလျှင်အစစ်အမှန်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဦး, သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ် - သူတို့ရဲ့ penises - porn သရုပ်ဆောင်များကို၏သူတို့နှင့်အတူ" ဟုသူမကပြောပါတယ်။
ဒီအတွေးအခေါ်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံသို့ဝင်သောသူတစ်လုလင်ကိုသူမထောက်ပြ, လုံလောက်မှုမရှိခံစားတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်: "သူကအလုံအလောက်ကြီးတွေဖြစ်ခြင်းမဟုတ်, မိမိလိင်တံ၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်ညစ်ညမ်းသရုပ်ဆောင်များကိုမှတက်တိုင်းတာပါဘူးခံစားရပေမည်။ "
စိတ်ပညာရှင်နှင့် psychotherapist ရှာရုန် Travers လည်း "erectile အခက်အခဲများနှင့်အတူ ပို. ပို. လုလင်တို့သည်မြင်လျှင်။ " ဖြစ်ပါတယ်
လုလင်တို့သည်ညစ်ညမ်းအများကြီးစောင့်ကြည့်ပါလျှင်သူမပြောပါတယ်, ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကောင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌မလုံလောက်တဲ့သဘောမျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် - ကလည်းတစ်ဖက်နှင့်အတူရငျးနှီးအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
လုလင်တယောက်သည် erectile အခက်အခဲများကြုံနေရသည်ဆိုပါကသူမကသတိပေး, ကလိင်န်းကျင်ကသူ့ယုံကြည်မှုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နှင့်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
"လိင်ဟာအဲဒီလူရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ပြီးဒါဟာအထူးသဖြင့်လူပျိုနှင့်အတူ, သူ့ပြည်တွင်းရေး psyche ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်" ဟုသူမကစဉ်အသက်ကြီးအသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် erectile အခက်အခဲများသို့မဟုတ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလက်မခံခြင်းနှင့်အိုမင်းစေခြင်းငှါထည့်သွင်းကပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျားတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာရှိနိုင်ပါသည်။
ပါဝါစမစ်အများအပြားလူပျိုတို့အဘယ်အရာကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ရဲ့အကြီးအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆိုတော်ဖြစ်ဖို့ porn ထံမှဖိအားအောက်မှာသူတို့ Over-စိုးရိမ်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အကြောင်းကိုဖြစ်လာကြပေမည်, ထိုအခါသူတို့ ED ရှိယူဆယုံကြည်သည်။
ဒါကတစ်ခုစိုက်ထူရှိသည်ဖို့သူတို့မှားယွင်းစွာ Self-ဖော်ထုတ် ED နှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါသူတို့၏စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးသောလုလင်ကိုသူအလှည့်ရှိသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ရင်းနှီးမှုအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသည့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ကြဉ်စေခြင်းငှါတစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရလျှင်သူမကိုသူ့အဘို့အလုံအလောက်ဆွဲဆောင်မှုမပေးကြောင်းခံစားရပေမည်သူကို, Travers ကပြောပါတယ်, ဒီပေါင်းထည့်ရန်, ဒါမှမဟုတ် အသံမ။
ညစ်ညမ်းမကြာခဏအမျိုးသမီးတွေ objectifies ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဆက်ဆံရေးများအတွက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
လုလင်တယောက်သည်ပြဿနာများကြုံနေရလျှင်သူမကပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်သူမဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းမရှိထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့တစ်မိသားစုဆရာဝန်ရှုမြင်ကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်နှင့်နောက်ခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများရှိစေခြင်းငှါလျှင်, လာမယ့်ခြေလှမ်းကသူ့အခက်အခဲတွေစူးစမ်းလေ့လာမယ့် psychosexual ကုထုံးတိုင်ပင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်မြန်နှုန်းမြင့် broadband မှတဆင့်ညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံပမာဏစောင့်ကြည့်သူကိုလုလင်တစ်ဦးလူနည်းစုအတွက်ကျယ်ပြန့်ရှုမြင်ကြသည် TEDx ဟောပြောပွဲ, ဂယ်ရီ Wilson ကအားဖြင့်မဟာ Porn စမ်းသပ်မှုမှထောက်ပြသူကိုပါဝါစမစ်, အရသိရသည်သိသိသာသာပြဿနာများကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်များနှင့်မကြာခဏရယ်စရာလိပ်စာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်အမှန်တကယ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောအတိုင်းအတာအထိ Over-ဆွမှုနိုငျပုံကိုပြသသည်။
အတော်များများကလူပျိုတို့, Wilson ကဟောပြောချက်ထဲမှာကရှင်းပြသည်, porn အလွန်ကြီးမားတဲ့ပမာဏစောင့်ကြည့်ဖို့မြန်နှုန်းမြင့် broadband သုံးပါ။
သူတို့ကတော်တော်များများပြတင်းပေါက်အခြားနဲ့အတူ masturbating နေချိန်မှာတဦးတည်းလက်နှင့်အတူညစ်ညမ်းကးကတဆင့်နှိပ်ခြင်း, တစ်ပြိုင်နက်ကိရိယာပေါ်မှာဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
သူတို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, သူသူတို့တစ်တွေ dopamine ထိခိုက်ရကရှင်းပြသည်။
အမှန်ကတော့အဘယျအဖြစ်ပျက်ရဲ့သူတို့ထပ်တလဲလဲသေးငယ်တဲ့ dopamine hits နှင့်အတူ tumescent နေဖို့သူတို့ရဲ့လိင်တံဆုံးမဩဝါဒပေးနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
လုလင်တယောက်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူစစ်မှန်သောဘဝလိင်ဆက်ဆံသောအခါသို့သော်ပါဝါ Smith ကပြောပါတယ်, သူဖွင့်သူက dopamine hits တစ်စီးရီးကိုမျှော်လင့်ရန် '' ရထား '' သည်သူ၏လိင်တံမှ porn တစ်ခုအလွန်အကျွံငွေပမာဏကိုသုံးလျှင်ဒါရုံတစျခု dopamine hit ရရှိသွားတဲ့ ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဘဝလိင်တစ်ခုစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကသူ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။
ဒီယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်း၏အလွန်အရေးပါသောငွေပမာဏကိုကြည့်ရှုသောသူသည်သာလုလင်တို့သည်အကျိုးသက်ရောက်စေမယ်လို့သော်လည်း, အလေ့အထအလားအလာဆေးခန်းရောဂါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါကောင်းသောသတင်းများ, ပါဝါစမစ်ကပြောပါတယ်ပြန်လည်နာလန်ထူ porn မှထိတွေ့မှု၏တဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချရေးမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပြီး, နောက်ဆုံးမှာလုံးဝရပ်တန့်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုကို real-ဘဝတွေ့ဆုံအတွက်တုံ့ပြန်မှုပေါ်ဤအကြောင်းသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
"လူပျိုနှင့်အတူ, သူတို့နှင့်အတူအိပ်မိန်းမများ, သူတို့ကိုအကြောင်းပြောဆိုမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများကိုပြောပြခြင်းနှင့်ထိုလူရဲ့လိင်တံသည်မည်မျှသေးငယ်တဲ့အကြောင်းရယ်ရှိသည်, သူအိပ်ရာခဲ့ပုံကိုမကောင်းတဲ့, ဒါမှမဟုတ်သူစိုက်ထူပြဿနာများကြုံတွေ့ကြောင်းဦးမည်အကြောင်း, အမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်လည်းမရှိ " သူမကပြောပါတယ်။
"လူငယ်ယောက်ျားက (ကွောကျရှံ့ခွငျး) အခြားယောက်ျားချွတ် slagging အမျိုးသမီးငယ်ကြားနာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေကြွလာပြောကြပါတယ်။
"လူအပေါင်းတို့တွင်, ငါမြင်ယောက်ျား၏အကြောင်းကို 70% erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမရှိကြပါဘူး။
"သူတို့ကကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း, ဆင်းရဲသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည့် erectile အခက်အခဲများရှိသည်။ "
အတော်များများကလုလင်တို့ကခက်ခဲ ED နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ရှာတှေ့နိုငျနှင့်ရလဒ်အဖြစ်အထီးကျန်ခံစားရပေမည် - သူတို့မကြာခဏ '' ဗူး '၌ကောင်းစွာလည်ပတ်စဉ်တို့သည်အစဉ်ကြောင့်ပြဿနာများ intimate မှကြွလာသောအခါတစ်ဦးချင်းစီကတခြားထောက်ပံ့မှာထိရောက်သောမရှိကြပေ။
တစ်ခုစိုက်ထူရှိသည်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လူနိုင်စွမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်နောက်ထပ်ပြဿနာကသူ့ကိုယ်ပိုင် masturbatory စတိုင်ဖြစ်ပြီး, ပါဝါစမစ်ကပြောပါတယ်။
"တချို့ယောက်ျားကသူတို့လိင်တံအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ချုပ်ကိုင်ထားရှိသည်နှင့်ကိုင်နှင့် ejaculate နိုင်ရန်အတွက်ဖိအားများနှင့်မြန်နှုန်း၏မြင့်မားသောအဆင့်နှင့်ကိုယ်ကိုမထိနိုင်," ဟုသူမကပြောပါတယ်။
အကယ်. ထိုလူရဲ့လက်တွဲဖော်, သူသို့မဟုတ်သူမသူ့ကိုသူ၏စိုက်ထူဆုံးရှုံးဖို့ဖြစ်စေတဲ့လွန်းညင်ညင်သာသာအဲဒီလူရဲ့လိင်တံကိုထိစေခြင်းငှါသူ၏ခိုင်ခံ့သော masturbatory စတိုင်သတိထားမဟုတ်ပါဘူး။
သောကြောင့်တိုးမြှင့်ပြဿနာရဲ့အသိအမြင်နှင့်အဲဒါကိုအကြောင်းပြောဆိုပိုမိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကို၏, အတိတ် 10 နှစ်အတွင်း, မိသားစုဆရာဝန်အိုင်ဗင်မာတင်ကပိုကလူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပြဿနာများသတင်းပို့ဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။
ED ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံး, အကြောင်းတရားများ၏နံပါတ်ကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်, ယောက်ျား၏ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးစိတျဝငျစားသူမာတင်, Rosscarbery ၏အနောက်ဖော့ဆို့ရွာအတွက်မိသားစုဆရာဝန်မှတ်ချက်ချတယ်။
သူဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်စပ်လျဉ်းအထူးသဖြင့်လူပျိုတို့ပိုမိုဘုံဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်, တွေ့။ သူလည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအများကြီးစောင့်ကြည့်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖြစ်သင့်အရာကိုလက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်များဖွံ့ဖြိုးဆဲလူပျိုတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်သည်။
"ကျနော်တို့ထဲမှာလာကအကြောင်းပြောဆိုရန်လူတိုက်တွန်းပါသည်။ ဒါဟာအကြောင်းမရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှိမရှိ, အမြစ်အကြောင်းမရှိမှရတဲ့အကြောင်းပါ။
"ဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသို့မဟုတ်အမှုအရာတကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးရှိရာအခြေအနေကိုအောက်ပါအနုတ်လက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဆင်းလာပါတယ်။
"တစ်ခါတလေပိုပြီးအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်သည့်မိတ်ဖက်ထံမှဖိအားရှိစေခြင်းငှါ - တစ်ဦးနားလည်မှုဖက်သောအရာတို့ကိုအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေသည်" ဟုသူကထိုကဲ့သို့သောလုပ်နိုင်တဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်တွေအဖြစ်, အရက်အလွဲသုံးစားမှုလည်းတစ်ခုစိုက်ထူရှိသည်ဖို့လူနိုင်စွမ်းတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းကပြောပါတယ် စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအဖြစ်အချို့သောဆေးဝါးများလည်းအခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်နေစဉ်။
သင့်မိသားစုဆရာဝန်ကိုကြည့်ပါ, သူကတိုင်ပင်။ "လူပျိုတို့မှာတော့အကြောင်းရင်းများသောအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူကအလုပ်မလုပ်ဘူး, ပြီးတော့နောက်တဖန်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဦးခေါင်းကအကြောင်းကျသွားနှင့်သူတို့ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးဒါကြောင့်လာမယ့်အချိန်လုပ်ကိုင်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအနှုတ်လက္ခဏာလိမ်သို့လှည့်နိုင်ပါသည်။ "
တစ်ဦးကဆရာဝန်နောက်ခံကိစ္စများရှာလို့ရပါတယ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများထဲကအာဏာရအများအပြားသည်လုလင်များအတွက်အာမခံနိုင်ဖြည့်စွက်, သူထောက်ပြ, သွေးစမ်းသပ်မှုကြာနှင့်မကြာခဏရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများထွက်မအုပ်စိုးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
"ပြဿနာကိုကူညီပေးဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူရှိပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တစ်ဦးစာရေးမိသားစုဆရာဝန်ကိုမြင်လျှင်နှင့်သင့်ရင်ဘတ်ကချွတ်ရတဲ့နှင့်လေးနက်ဘာမှထွက်အာဏာရအကြောင်းပါ။ ဘာမျှမ သိ. ၏သက်သက်အာမခံကြီးမားတဲ့အကူအညီနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှားယွင်းနေသည်။ "
စာရေးသူနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာမာ့ခ်ရိုဝီက“ အသက် ၂၀ မှ ၃၀ အတွင်းလူငယ်များနှင့်အတူ၊
"ဒီဂန္အခွအေနေမူးရူး-အရက်သောက်ထွက်ဝင်နှင့်သူတို့ '' ဘရူရဲ့တွဲ '' ကိုခေါ်ဖို့အသုံးပြုဘယ်အရာကိုရရှိသွားတဲ့သူတစ်ဦးလုလင်ကိုဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
"သူကစိုးရိမျရရှိသွားတဲ့နှင့်, စိုးရိမ်ပူပန်အတွက်ကန်နှင့်တစ်ဦးစိုက်ထူရှိသည်ဖို့ကသူ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေခြင်းနှင့်တစ်ခုစိုးရိမ်ပူပန်မှုကွင်းဆက်အထဲသို့ဝင်နိုင်တယ်။ "
ဒါဟာဘက်စုံချဉ်းကပ်မှုယူအရေးကြီးပါတယ်။ "မဆိုလူနေမှုပုံစံစတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုကစားမှာဖြစ်နိုင်ပါသည်ရှိမရှိကြည့်ဖို့ကြည့်ဖူး" ဟုသူကပြောပါတယ်။
နှင့်သင့်ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ဝမ်းအရွယ်အစားစဉ်းစားပါ။ "သင်သည်သင်၏ bellybutton ဖြတ်ပြီးတစ် 42in ခါးရှိပါကသင် 50in ခါးရှိပါကကြောင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်ဖို့ 32% ပိုများပါတယ်။
သငျသညျပိုလျှံအဆီသယ်ဆောင်ကြသောအခါကအလှည့်တစ်ခုစိုက်ထူရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့စွမ်းရည်အပေါ် impact နိုင်သည့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟော်မုန်းစနစ်, နှောင့်ယှက်။ "